Budebuduze Serpievka umuzana Chelyabinsk esifundeni Ignatievka Umgede, okuyinto edumile hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi emhlabeni wonke. Kuyinto omunye 9 izikhumbuzo eziyingqayizivele inkathi Paleolithic, lapho imidwebo eminingi yasendulo wathola ngumuntu. Kuvame kuqhathaniswa ezifana emihumeni odumile njengoba Altamira (Spain) kanye Lascaux (France).
Izimfihlo Ignatievka Umgede
Ignatievka Umgede ngokuphindaphindiwe wavakashela abavubukuli ezivela emazweni ahlukahlukene. Kodwa kuphela ngo-1980, kuye kwaba zathola amadlingozi omunye enisemajukujukwini amasayithi wathi kuye kwatholakala imidwebo zabantu lasendulo. Bakhandwa esisogwini ophahleni kanye ezindongeni. Kusukela ngaleso sikhathi, Chelyabinsk esifundeni emihumeni ayedumile emhlabeni. Ngokusho ososayensi, wathola imidwebo benziwa ayizinkulungwane 14-16. Eminyakeni eminingi edlule. Sekukonke kukhona amaqembu angaba ngu-40.
Lapha ungakwazi ukubona izithombe ongokoqobo ngokulinganiselwa woolly, inkunzi, ubhejane nezinye izilwane, kanye oluyimfihlakalo izimpawu yejeyomethri. Kodwa kuyafaneleka ukuthi gallery ne izithombe ibekwe ezindaweni akude, kude ukukhanya sosuku. ososayensi banamuhla bakholelwa ukuthi endulo Ignatievskaya umhume endaweni yezenzo isiko. Phela, bakudala indoda emhumeni wabonakalisa isimo Lesisemkhatsini phakathi kokufa nokuphila.
Isimanga siwukuthi kodwa indaba akuphelanga Ignatyevskoe emihumeni ezikhathini zasendulo. Sekungamakhulu eminyaka kwaba indawo yokukhosela njengenhlangano abavamile umthetho-amadlambi, futhi Old Amakholwa, ecashele yokucindezela olusemthethweni iSonto Lobu-Orthodox. Ngokusho yetinsita igama layo lamanje, lokhu emhumeni Lethiwa unkom 'idlayodwa Ignatius, owayehlala lapha ekhulwini le-19.
Okokuqala Ignatievka Umgede ngekhaya kuye, khona-ke indawo yokungcwaba. Emuva in the 50s of leminyaka elidlule, lapha ungabona izinsalela uhlaka lokhuni, lapho u-Ignatius wahlala. Lesi sakamuva ngemva kokufa kwakhe waqala ukufunda. Ngakho, phakathi Russia tsarist zonke 9 th ngoLwesihlanu ngemuva Easter Ignatievka Umgede zathuthelekela inombolo enkulu pilgrim.
Kuyinto ayikaziwa liyini ngempela unkom 'idlayodwa Ignatius. Abanye bathi wayemuhle schema Grand Duke Konstantin Pavlovich (umfowabo Nicholas I), njengoba abanye bakholelwa, ukuthi ngaphansi kwegama Ignatius ukufihla umhlalaphansi uMbusi u-Alexander I. Manje mayelana owayehlala lapha uma umdala sifana Umfanekiso elincane owesifazane juqa kwenye izindonga babehlezi emuva emhumeni.
Microclimate Ignatievka Umgede
lokushisa njalo Ignatievka Umgede kuyinto +5 ° C. ehlanzekile komoya emhumeni kuyinto kunalokho ebuthakathaka. Esikhathini spray emoyeni iqukethe magnesium, i-potassium ne-sodium. Futhi-ke, kukhona ezingeni lelisetulu nomswakama. Njengezinye emihumeni Russia, uyindalo indlela okwakheke ngayo imvelo calcite ezihlotshisiwe, elilengayo, stalagmites futhi calcite emifuleni. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuthola amaparele emhumeni yangempela. Ngakho, Ignatievka Umgede isikhalazo nje kuphela abalandeli komlando, kodwa cavers. Ikakhulukazi ngoba itholakala eduze okungenani ethandwa Essyumskaya emhumeni.
Castle Abosky e Finland
Ukuvakashela Tunisia ngoJanuwari: sezulu, amathiphu zabahamba
Lost, Ngathola. Indlela yokuthola izinto elahlekile?
Mpumalanga ye-Asia: Indonesia
Amakhodi NFS Underground 2: Incazelo kanye Umsebenzisi
Izimpawu eziyinhloko sikashukela ingane: yini okufanele unake?
Pisces wesifazane. Indlela ukunqoba intokazi?
Troit injini "Ngaphambi" (umphini 16): izimbangela kanye ukulungisa le nkinga. Indlela hlola inhlansi ukuthungela ikhoyili "Lada Priora"
Yini ukunikeza lokuzalwa wentombazane?
Indaba yangempela mayelana emajele enobudlova kakhulu emhlabeni
Ideshi le-Em. Udeshi omude ku ikhibhodi. Em Uziphahlaze - ukuletha kanjani?